October 2016 | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
रगत जँचाउँदै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यानदिनुहोला
10/28/2016 01:49:00 PM स्वास्थ्य
जुनकुनै रोग लाग्दा पनि रक्तपरीक्षण अनिवार्यजस्तै हुन्छ । रक्तपरीक्षणको नतिजाअनुसार नै डाक्टरले उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउने गर्छन् । त्यसैले रक्तपरीक्षण उपचार प्रक्रियाको महत्वपूर्ण र पहिलो जाँच हो । फरक–फरक जाँचका लागि रगत दिनुअघि फरक–फरक कुरामै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले रगत जँचाउनुअघि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यस्ता छन्ः
१. रक्तपरीक्षण गराउनुअघि प्रेसरमा नहुनुहोस् । हतार–हतारमा दौडिँदै गरेर आएको तथा कडा कसरत गरेलगत्तैको अवस्थामा रक्तपरीक्षण नगराउनुहोस् । केहीबेर आराम गरेर शान्त अवस्थामा रगत दिनुहोस् । शरीर तातेको अवस्थामा निकालिएको रगतको जाँचमा क्रेटिनियम फरक पर्न सक्छ ।
२. लिपिड प्रोफाइल, फास्टिङ ब्लडसुगरजस्ता परीक्षण गर्ने हो भने ८ देखि १० घन्टासम्म पेट खाली राख्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो परीक्षण गर्नुअघिको यो अवधिमा पानीसमेत पिउनुहुँदैन । चिकित्सकसँग राम्रोसँग अग्रिम सल्लाह लिनु उत्तम हुन्छ ।
३. युरियाजस्ता रोगको पहिचानका लागि रक्तपरीक्षण गर्ने हो भने अघिल्लै दिनदेखि माछा–मासु तथा प्रोटिनयुक्त डाइट खानुहुँदैन । साधारण खाना खान भने मिल्छ ।
४. थाइराइडलगायत विभिन्न हार्मोनको अवस्था बुझ्न रक्तपरीक्षण गर्नेले रगत दिनुअघि फास्टिङ गर्नु राम्रो हुन्छ । बेलुका खाना खाएपछि बिहान केही नखाई रक्तपरीक्षण गराउनुपर्छ ।
५. रगत दिइसकेपछि आफ्नो रगत राखिएको भाँडोमा लगाइएको स्टिकर नम्बर र बिरामी कार्डमा लेखिदिएको नम्बर एउटै भए–नभएको ख्याल गर्नुपर्छ । रक्तपरीक्षणको रिपोर्ट लिन जाँदा बिरामी कार्डको नम्बरअनुसार लिनुपर्छ । हुलमुलमा कहिलेकाहीँ उल्टो रिपोर्ट परेर उपचार प्रक्रिया नै गलत भएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । अस्पतालका सम्बन्धित प्राविधिकसँगै बिरामी तथा बिरामीका आफन्त यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।-पृथ्वीविक्रम खड्का, ल्याब टेक्निसियन शुक्रराज सरुवारोग अस्पताल
10/28/2016 01:44:00 PM स्वास्थ्य
सामान्यतय मस्तिष्कघात वृद्ध उमेरका मानिसको रोग हो । तर, अहिले यो रोग युवामा पनि देखिन थालेको छ । नर्भिकमा मात्र एक महिनाको अवधिमा ७० देखि ९० जना मस्तिष्कघातका बिरामी आइपुग्छन् । उपचारका लागि आएका बिरामीमध्ये नशा बन्द भएर हुने मस्तिष्कघातका बिरामी ८५ प्रतिशत र नशा फुटेर हुने ब्रेन हेमरेजको समस्या लिएर आउने १५ प्रतिशत छन् ।
मस्तिष्कघात भएका बिरामीलाई सबैभन्दा पहिला सिटी स्क्यान गरेर उपचार प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । रगतको नशा फुटेर हुने स्ट्रोक र नशा थुनिएर भएको स्ट्रोकको उपचार पद्धतिमा पूरै फरक छ । मस्तिष्कघातले कुन भागमा कति असर गरेको छ भन्ने सिटी स्क्यानमा देखिएको आधारमा उपचार गरिन्छ । बिरामीलाई पूर्ण रुपमा ठीक हुन्छ कि हँुदैन भन्न सकिन्न । यसकोे प्रकार, उपचार प्रविधि, उपचार सुरु गरेको समय, बिरामीको उमेर र उसको अन्य शारीरिक समस्या आदिमा भर पर्छ ।
मस्तिष्कघातले दिमागको मुख्य र ठूलो भागमा असर गरेको छ भने बिरामीमा अपेक्षाकृत सुधार नआउन पनि सक्छ । तर, दिमागको छेउमा र सामान्य मात्र क्षति भएको छ भने पुरानै अवस्थामै फर्कन सक्छन् । केहीमा क्रमिक रुपमा सुधार आउँदै जाने हुन्छ । तर, अधिकांश बिरामीमा मस्तिष्कघात भएपछि शरीरको कुनै भाग नचल्ने तथा प्यारालाइसिस हुने सम्भावना बढी छ । प्रायः यस्ता बिरामी जीवनभर लौरोको सहारामा वा ह्वीलचेयरमै बसी राख्ने वा हिँड्डुल गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । कतिपय बिरामीचाहिँ उठबस गर्न सक्ने नभई ओछ्यानमै परिराख्ने अवस्थामा पनि हुनसक्छ ।
स्ट्रोक भइसकेपछि सकेसम्म चाँडै उपचार सुरु गर्नुपर्छ । स्ट्रोकको उपचार जति छिटो गर्न सक्यो, त्यति धेरै बिरामीलाई पर्न सक्ने अन्य असर कम गर्न सकिन्छ । नशा बन्द भएर हुने स्ट्रोकमा केही घण्टाभित्रै उपचार थाल्न सकियो भने बन्द भएका नशा खुली मस्तिष्कमा स्थायी असर पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । यसको मूलभूत उपचार भनेकै औषधिको प्रयोग हो । औषधि प्रयोग गरी पर्याप्त मात्रमा मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार र अक्सिजन सञ्चार गराई मस्तिष्कको थप क्षति हुन कम गर्न सकिन्छ ।
इसका लागि टिस्यु प्लाज्मोपमनेजम एक्टिभर (टिपिए) नामको औषधि दिने गरिन्छ । तर, यसलाई औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएर सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन सकेको छैन । सरकारले यो औषधिलाई सहज उपलब्ध हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यो थेरापीबाट थुनिएको नशा खोलेर बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ । तर, ब्रेनमा रगत बगेको अवस्थामा यो थेरापीले काम गर्दैन ।
कहिलेकाहीँ मस्तिष्कको पे्रसर अत्यधिक बढ्न गएमा शल्यक्रिया आवश्यक हुन सक्छ । यी सबै उपचार गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ समस्या नियन्त्रण गर्न नसकी बिरामीको अवस्था झनै नाजुक हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई भेन्टिलेटर (कृत्रिम श्वासप्रश्वास) मा राख्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसको बाबजुत बिरामीको अवस्थामा सुधार नआई मृत्यु पनि हुनसक्छ । मस्तिष्कमा रगत प्रवाह गर्ने नशाका भित्री भागमा जमेको क्लर्टलाई निकाल्न अहिले नयाँ प्रविधिसमेत आइसकेको छ । मर्सी, सलिटोरजस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट त्यस्ता क्लर्टलाई तान्न सकिन्छ । यस्तो क्लर्टलाई तान्न समस्या पर्ने अवस्था भएमा नशा पूर्ण रुपमा थुनिएको छ भने बाइपास सर्जरी समेत गरिन्छ ।
नशा फुटेर ह्यामरेज भएको बिरामीको दिमागमा जमेको रगतलाई चिकिस्तकहरुले निकाल्ने काम गर्छन् । बिरामीको दिमागमा जमेको रगतलाई टाउकोमा सानो प्वालबाट निकाल्ने गरिन्छ । यदि दिमागमा ३० एमएलभन्दा बढी रगत जमेको छ भने शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालमा आएर उपचार भइसकेका बिरामीलाई त्यसपछि फिजियोथेरापीको आवश्यकता पर्छ ।
मस्तिष्कघातका कारण बिरामी लामो समयसम्म ओछ्यानमा परिराख्ने, हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा हुने भएकाले शरीरमा थप नयाँ समस्या आउने गर्छ । यस्तो अवस्थामा धेरैलाई छातीको संक्रमणकोसंभावना अधिक हुन्छ । निमोनिया तथा फोक्सोको संक्रमणसमेत हुने खतरा रहन्छ । त्यसकारण बिरामीहरुलाई चिकित्सकको निगरानीमा राखेर नै अन्य उपचार पनि गर्नुपर्छ । बिरामीको हातगोडामा रक्तनली जाम हुने, हात÷गोडा आदिमा खाटे घाउको पनि जोखिम रहन्छ । बिस्तारै मिर्गौला र कलेजोको काम गर्ने शक्ति कम हुँदै जान सक्छ । यस्ता समस्या सकेसम्म हुन नदिन सुरुदेखि नै ध्यान पु¥याउनु पर्छ । शल्यक्रिया र अस्पतालको उपचारपश्चात पनि परिवारले बिरामीको शरीरको उचित हेरचाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
डा जलान नर्भिक अस्पतालका न्युरो फिजिसियन हुन् ।-
मृगौला परिक्षण स्वास्थ्य चौकीमै हुने
10/28/2016 01:41:00 PM स्वास्थ्य
मृगौलामा कुनै खरावी छ की छैन भन्ने परिक्षण गराउने व्यवस्था अवदेखि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै हुने भएको छ ।
मृगौला परिक्षणका लागि प्रयोग हुने “डिपिस्टीक किट” मनाङ्ग वाहेकका सवै जिल्लामा पठाई सकिएकाले स्थानीय तहमै मृगौला परिक्षण गर्न पाईने भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आपुर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले देशभरी पहिलो चरणमा २० लाख जनाको मृगौला परिक्षण गर्न पुग्नेगरी किट पठाइएको जनाएको छ ।
महाशाखाका निर्देशक डा भिमसिंह टिंकरीले मनाङ्गमा बाटोको समस्याका कारण केहीदिनपछि पुग्ने र अरु सवै जिल्लामा किट पठाईसकिएको जानकारी दिए ।
चार महिना अगाडी नै किट पठाउने भनिएपनि कार्यान्वयन नभईरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको निर्देशनपछि सवै जिल्लामा मृगौला परिक्षण गर्न सकिने व्यवस्था हुन लागेको हो ।
मन्त्री थापाको निर्देशन अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अंचल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल लगायत गरी १ सय ३३ ओटा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरी किट वितरण गरिएको छ ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पुगेको किटलाई केहीदिनमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार मातहतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा पठाउने भएको छ ।
२० मिलिलिटर जति पिसावले किट भिजाएपछि देखिने किटको रङ्गका आधारमा मृगौलाको अवस्था थाहा हुने डा. टिंकरीले जानकारी दिए ।
परिक्षण गर्दा कुनै समस्या नभएको देखिएमा एक बर्षपछि फेरी परिक्षण गर्न आउन सुचित गरिने र समस्या देखिएमा थप उपचारका लागि आग्रह गरिने उनले बताउनुभयो ।
सरकारले ल्याएको नयाँ सेवालाई उपयोग गरी आफ्नो मृगौलाका बारेमा थाहा पाईराख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सवैलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले यसै बर्ष विद्यालयहरुमा स्वास्थ्यकर्मी सहित किटहरु पठाएर विद्यार्थीहरुको मृगौला परिक्षण गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।-स्वास्थ्य खबरपत्रिका
10/28/2016 01:35:00 PM विचार
10/28/2016 01:02:00 PM समाचार
संविधान संशोधन नभए छठपछि आन्दोलनः महतो
10/28/2016 01:01:00 PM समाचार
सप्तरी (राजविराज), कात्तिक १२ गते । सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधन अविलम्ब हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
सप्तरीको राजबिराजमा आज पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले सरकार गठनको क्रममा मोर्चासँग गरेको तीनबुँदे सम्झौता छठसम्म माग पूरा नगरे मधेस र मधेसी जनताको हितको लागि फेरि आन्दोलन हने चेतावनी दिनुभयो ।
संविधान संशोधनमार्फत मधेसका समस्या समाधान नभएमा सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिन सकिनेछ उहाँले भन्नुभयो ।
सङ्घीयताको खाका तयार नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन नहुँने भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई हटाउने सम्बन्धमा मधेसी मोर्चासँग छलफल नभएको समेत बताउनुभयो । रासस
10/28/2016 01:00:00 PM धर्म , समाचार
काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । कात्तिक कृष्ण त्रयोदशीका दिन शुक्रबार कागको पूजा गरी कागतिहार मनाइँदैछ । यमपञ्चकको यो पहिलो तिथिदेखि पाँच दिनसम्म यमलोकबाट आफ्नी बहिनी यमुनालाई भेट्न यमराजले मत्र्यलोक विचरण गरेका हुन्छन् भनिन्छ ।
कागले यमराज र बहिनी यमुनाबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने भूमिका खेलेको प्रसङ्ग यो दिनसँग जोडिएको छ । कागलाई यमदूतका रूपमा पूजा गरिन्छ । कागलाई यसै दिन भोजन गराउँदा सोझै पितृले पाउँछन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । ज्योतिष डा. सुनिल सिटौलाका अनुसार कागलाई नित्य भोजन गराउँदा प्रशस्त धनलाभ हुने ज्योतिषशास्त्रीय मान्यता छ । कागलाई निकै चतुर पक्षीका रूपमा बुझिँदै आएको छ ।
यसै दिन आयुर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरीको आराधना गरी राष्ट्रिय आरोग्य दिवस मनाइँदैछ । बाग्मती अञ्चल आयुर्वेद औषधालय (जयबागेश्वरी)ले जयबागेश्वरीमा अवस्थित धन्वन्तरीको पीठमा पूजन गरेर दिवस मनाउँदैछ । मुलुकमा धन्वन्तरीको एकमात्र प्रस्तरपीठ रहेको यो क्षेत्र रावणलाई उपचार गर्ने वैद्य समुदाय बसोबास गर्ने थलोका रूपमा पनि प्रख्यात छ ।
10/28/2016 12:59:00 PM समाचार
नेपाल र जापानबीच मैत्रीपूर्ण च्यारिटी फुटबल हुने
10/27/2016 04:14:00 PM खेलकुद
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बिद्यालयको पुनर्निर्माणको लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली र जापानको व्यवसायिक फुटबल खेलाडीहरु सम्मिलित टोलीबीच मैत्रीपूर्ण च्यारिटी फुटबल हुने भएको छ ।
खेलकुद सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जापानी सामाजिक संस्था कलरबाथ र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको संयुक्त आयोजनामा आगामी मंसिर ४ गते सातदोवाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा च्यारिटी फुटबल हुनेछ ।
खेलका लागि सन् २००२ को विश्वकप फुटबलमा जापानी टोलीबाट प्रतिनिधित्व गरेका टोडा काजुयुकीको नेतृत्वमा १६ सदस्यीय टोली नेपाल आउनेछ । उनीहरुले नेपालको राष्ट्रिय टोलीसँग एक मैत्रिपूर्ण फुटबल खेल्नेछ ।
सन् २०२० को ओलम्पिकलाई लक्षित गरी जापान सरकारले सञ्चालन गरेको ‘स्पोर्टस फर टुमरो’ले पनि यस च्यारिटी खेललाई सम्बन्धन दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कलरबाथका नेपाल अध्यक्ष गणेशमान लामाले च्यारिटी खेलको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई जापानमा चिनाउनु भएको बताए ।
कलरबाथले दुई बर्षअघिनै नेपाली टोली र जापानी टोलीबीच मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएपनि गत बैशाख १२ को बिनाशकारी भूकम्पका कारण योजना सफल हुन सकेको थिएन ।
कलरबाथका नेपाल अध्यक्ष लामाले भूकम्पपछि आफुहरुको उद्देश्यमा केहि परिवर्तन गरी भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको बिद्यालय तथा फुटबल प्रशिक्षण गर्न सकिने मैदान निर्माणमा च्यारिटीबाट उठेको रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रंगशालामा गर्ने तयारी भएपनि खेलकुद परिषदले रंगशाला उपलब्ध नगराएका कारण सातदोवाटोमा गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बन्द दशरथ रंगशाला यही खेलबाट खुलेको जानकारी हामी दिन चाहन्थ्यौं तर परिषदले हामीलाई मैदान उपलब्ध गराएपनि प्याराफिट उपलब्ध गराएन ।’, उनले थपे, ‘भूकम्पपछिको यति लामो समयसम्म पनि परिषदले रंगशाला पुनर्निर्माण सम्पन्न नगर्नु दुखद पक्ष हो । हामीले प्राबिधिक जाँच गरेर रंगशाला प्रयोग गर्छौं भन्दा पनि परिषदले दिएन ।’
दशरथ रंगशाला उपलब्ध नभएपछि सातादोवाटोमा रहेको मैदानमा केहि अस्थाई प्याराफिट निर्माण गरी खेल खेलाउने तयारी भइरहेको सिइओ तुलाधरले जानकारी दिए । सिइओ तुलाधरले रंगशाला पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए ।-अनलाइनखबर
भारत र चीनका राष्ट्रपति नेपाल आउँदा सार्बजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय
10/27/2016 01:30:00 PM समाचार
काठमाडौं,कार्तिक ११ गते । भारत र चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउने दिन सरकारले सार्बजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई छिमेकी देशका राष्ट्रप्रमुख नेपाल भ्रमणमा आउँदा सार्बजनिक विदा दिने निर्णय गरेको हो ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी यही कात्तिक १७ गते नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमण भने टुंगो लागिसकेको छैन ।
घरेलुमा आचार्य नियुक्त
यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले घरेलु तथा साना उद्योग विकास सञ्चालक समितिमा सिन्धुली झाँगाझोलीका उर्गेन्द्र आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै थानकोट-चित्लाङ गणेशमान मार्गको स्तरोन्नती गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिए ।-अनलाइनखबर
सशस्त्र प्रहरीको योजना- ग्यास बुलेटमा लगानी, उपचार कोष स्थापना
10/27/2016 01:20:00 PM समाचार
१६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा हलचोकमा विशेष समारोह
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राई
काठमाडौं,कार्तिक ११ गते । सशस्त्र प्रहरी बलले बिहीबार बिहान प्रधान कार्यालय हलचोकमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो १६ औं स्थापना दिवस मनाएको छ । सरकारले २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल स्थापना गरेको थियो । तात्कालिन अवस्थामा माओवादी जनयुद्ध चर्किदै गएपछि नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका विचमा अर्को एक शक्ति खाँचो महसुस गरी दुवै सुरक्षा निकायका केही जनशक्ति ल्याई सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरिएको थियो ।
१६ औ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले सधैं आफ्नो दायित्व पूरा गर्न मातहतका सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिए । परिवर्तित सन्र्दभमा चुनौतिहरु पनि थपिदै जाने भन्दै उनले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विचलित नभई सुम्पिएको दायित्वमा खरो उत्रिन निर्देशन दिए ।
महानिरिक्षक राईले सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउन उपकरणहरुको खरिद प्रक्रियालाई चाँडै नै अघि बढाउने बताए । उनले मुटु, हेपाटाइटिस, क्यान्सरलगायत रोग लागेका सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला र अवकास प्राप्त सुरक्षा अधिकारीको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्न छुट्टै कोष स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरे ।
उनले सरकारको निर्देशन अनुसार सशस्त्र प्रहरी बलले पेट्रोलपम्प तथा ग्यास स्टेसन निर्माण गरी बुलेट तथा ट्यांकरको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न लागेको जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा वर्षभरी उत्कृष्ट काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी तथा गुल्म लगायतलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।-अनलाइनखबर
संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने– बडू
10/27/2016 01:12:00 PM समाचार
जनकपुरधाम, कात्तिक ११ गते । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संविधान संशोधनको तयारी सकारात्मक ढङ्ग अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन धनुषाद्वारा आज जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताउँदै उहाँले संविधान संशोधनको समस्यालाई छिटो टुङ्ग्याउन इमानदारी आवश्यक छ भन्नुभयो ।
संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउन सबै पक्ष गम्भीर भई वार्ता र संवादबाट समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले संविधान संशोधन गर्दा समग्र राष्ट्रिय एकताको भावनालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो ।
संविधान संशोधनका लागि समय तोक्नुभन्दा पनि कहाँ, कति, के संशोधन गर्ने त्यसमा केन्द्रित हुनु जरुरी भएको धारणा राख्दै उहाँले यथाशीघ्र संविधान संशोधनको टुङ्गो लगाउनुपर्दछ भन्नुभयो ।रासस
10/27/2016 01:10:00 PM अन्तर्वार्ता
मात्र के भइदियो भने जति बेला गिरोहतन्त्र थियो, राजनीतिकर्मीलाई के लाग्यो भने यस्ता काम यिनले हाम्रा लागि गर्नेछन् । तर, लोकमानले उनका लागि नभएर आफ्ना लागि गर्ने भए ।तर लोकमानले पछिल्लो समय जस्तो क्रियाकलाप देखाए कतिले त उनलाई ‘समानान्तर सत्ता चलाएको’ आरोप लगाए के त्यो स्वेच्छाचारिताबाट प्रेरित थिएन ?
अहिले पनि भूमाधिपतिको शक्ति धर्माधिपतिहरुको शक्तिभन्दा बढी हुन्छ । आफ्नो वजनभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी छाने । उनले के बिर्से भने अब यहाँ सामन्तवादी व्यवस्था रहेन र पूरै अर्थतन्त्र दलाल अर्थतन्त्रमा परिणत भइसक्यो । दलाल अर्थतन्त्रमा कि त ठूला व्यापारीहरुसँग शक्ति हुन्छ कि तीनका लागि ज्ञान उत्पान गर्ने मिडिया, बुद्धिजीवी, धर्मको व्यापार गर्ने व्यक्तिहरुसँग हुन्छ । पहिलेको शक्तिको स्वरुप फेरिएर आजका यी शक्तिहरु पहिलेका भूस्वामी जत्तिकै शक्तिशाली भइसकेका छन् । त्यसैले लोकमानले यहाँको अर्थराजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई ठीक ढङ्गले ठम्याउन सकेनन् । जसको परिणाम ज्ञानका उद्यमीहरुले उनलाई राक्षस बनाउन खर्च गरे । तत्कालीन परम्परागत द्वन्द्व अहिले पनि त्यही रुपमा ज्ञान र सम्पत्तिबीच चलिआएको छ, यो नयाँ होइन ।यो समग्र उपक्रममा अदालतको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
अराजकताको बेलामा स्थायी सत्ताका अवयवहरु तुलनात्मक रुपमा शक्ति तौलेर जता तुला भारी हुन्छ, त्यसकै पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गर्दछन् । अदालतले शायद यो तुलनात्मक शक्ति हेर्यो । त्यसै पनि पहिलो संविधानसभा विघटनपछि यता केही पनि काम कानुनसम्मत भएको छैन । सबै काम आफ्नै तालले भएको छ । भन्दाखेरी त कानुनलाई जसरी अर्थाए पनि भो । शक्तिमानले कानुनलाई अर्थाउने हो । रामायणको एउटा पङ्क्ति छ– ‘सक्नेको कुनै पनि दोष हुँदैन ।’ अदालतले पनि सक्ने थियो दोष नहुने काम गरिदियो । तर तुलनात्मक शक्तिको आँकलन गरेर बलियो हुन सक्नेको पक्षमा ।भारतमा मोदीको विरोध गर्नेलाई पाकिस्तान समर्थक भने जस्तै नेपालमा लोकमानको विरोध नगर्नेलाई भ्रष्टाचार र भारतको समर्थक भनेर अथ्र्याइन्छ । के यो सही हो ?
उचालिने भनेको जो नजिक हुन्छ, त्यसैसँग हो । त्यसैले भारत विरोधी भावनासँग यहाँको राष्ट्रवाद जोडिन्छ । यस सँगसँगै एउटा राजनीतिक कारणसमेत छ । त्यो भनेको अहिलेको जुन सत्ता छ, त्यो सत्ता भारतसँग जोडिएको जस्तो देखिएको छ । किनभने यसअघिको ओली सरकारले आफूलाई भारतविरोधी भनेर प्रस्तुत गरेको थियो । भनेपछि निशाना लोकमान हो तर विरोध सरकारको पनि गर्न पाइयो । एउटा तिरले दुई निसाना साँध्न पाएपछि राजनीतिमा त्योभन्दा के चाहियो ? महाअभियोगको कुरा उठाउने डाक्टर केसी हुन् । म फेरि यो दोष गोविन्द केसीलाई नदिएर जुन किसिमको वातावरण सिर्जना गरिएको छ, त्यो वातावरणको भाषालाई गोविन्द केसीले वाणी मात्र दिएका हुन् भन्न चाहन्छु ।हाम्रा अन्य राजनीतिक एजेन्डाहरुलाई थाँती राखेर जसरी राजनीति लोकमान केन्द्रित भएको छ, के उनलाई महाअभियोग लगाई हटाइएपछि के हाम्रा सारा मुद्दा समाधान भएर जान्छन् र ? कसरी महशुस गराउन खोजिएको छ ।
अर्गानिक इन्टलेक्चुअलका लागि पनि लोकमान कुनै मुद्दा नै होइनन् । यो त जबरजस्ती खडा गरिएको भूत हो । मानौँ लोकमान हट्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखापर्नेछन् । लोकमान हटेमा हामीले आयात गर्ने चामलमा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ ? हामीकहाँ औद्योगीकरण छैन के त्यो हुन्छ ? हामीकहाँ विवादित संविधान लागू गरिएको छ, त्यसले गर्दा यहाँको राष्ट्रियता मानसखण्डित अवस्थामा पुगेको छ । के त्यो समस्या समाधान हुन्छ ? के हामी कहाँ चलिरहेको दलित, महिलामाथिको उत्पीडन अन्त्य हुन्छ ? के हाम्रो भाषिक समस्या समाधान हुन्छ ? के हाम्रो परराष्ट्र नीतिको समस्या समाधान हुन्छ ? यो भनेको फुर्सदिलो ‘लिजर क्लास’ले आफ्नो रमाइलोका गरेको कर्मबाहेक केही होइन । किनभने लिजर क्लासकाले पहिले कौडा खेल्थेपछि तास खेल्ने भए त्यसपछि रेडियो सुन्ने र पत्रपत्रिका पढ्ने भए । त्यस्तै आज उनीहरू इन्टरनेटमा दिनभरी खेलेर बस्छन् । यो उनीहरुको मनोरञ्जन र स्वार्थपूर्तिको तुष्टि गर्ने ठाउँ हो । सामान्यजनले यसको बारेमा त्यत्रो विधि चिन्ता लिनु पर्दैन ।राज्य संयन्त्रमा स्थायी र प्रभावकारी भूमिका ओगट्ने सेनाको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ ?
10/27/2016 12:57:00 PM विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदबार डोनाल्ड ट्रम्प स्पष्ट रुपमा सो दलको संस्थापन पक्षको पहिलो रोजाई होइनन् । नोभेम्बर ८ मा हुन गइरहेको निर्वाचनको यत्ति नजिक आएर पनि उनकै रिपब्लिकन पार्टीका केही हस्तीहरूले उनलाई अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् र डेमोक्र्याटहरूले उनलाई कति घृणा गर्छन् भन्ने कुरा त बताइरहनु पर्दैन । तत्कालिन समयमा रिपब्लिकन पार्टी समर्थक प्राथमिक मतदाताहरूमाझ सबैभन्दा बढी लोकप्रियता आर्जन गरेकाले नै उम्मेदबार मनोनयन प्रकृयामा उनलाई पार्टीका तर्फबाट पनि समर्थन जुटेको थियो ।
(फामी इजिप्टका पूर्व विदेशमन्त्री, अमेरिका तथा जापानका लागि इजिप्टका पूर्व राजदूत र कायरोस्थित अमेरिकन यूनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन्) रातोपाटीबाट
म्यानचेष्टर डर्बीमा सिटीको हार, युनाइटेड क्वार्टरफाइनलमा
10/27/2016 12:51:00 PM खेलकुद
हुवान माटाको गोलको मदतमा म्यानचेष्टर डर्बीमा युनाइटेडले सिटीलाई पराजित गरेको छ र, ईएफएल कपको क्वार्टरफाइनलमा स्थान बनाएको छ ।
बुधबार राति भएको खेलमा म्यानचेष्टर युनाइटेडले साविकको विजेता सिटीलाई १-० गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
घरेलु मैदान ओल्ड ट्रार्फडमा भएको खेलमा युनाइटेडका लागि माटाले ५४ औं मिनेटमा गोल गरे । त्यसअघि युनाइटेडका पल पोग्बा गोल गर्न चुकेका थिए । जान्टन इब्राहिमोभिचको पासमा उनको प्रहार सिटीका गोलकिपरले क्लियर गर्ने क्रममा पोष्टमा लागेर बाहिरिएको थियो ।
सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलाले आफ्नो टोलीमा नौं परिर्वतन गरेका थिए र तर, जित निकाल्न सकेनन् । उनले सबै प्रतियोगितामा गरी पछिल्लो ६ खेलमा जित हात पार्न सकेका छैनन् र, प्रशिक्षकका रुपमा उनको यो खराव रेकर्ड हो ।
खेलम सिटीले सुरुमा नै राम्रो मौका गुमाएको थियो । उसका इहिनाचोको हेड बल निकै आकासिएको थियो । दोस्रो हाफमा राहम स्टर्लिङ र सर्जिओ एग्युरोले केही प्रभाव छाडे पनि हार टार्न सकेनन् ।-अनलाइनखबर
‘दरौंदी ए’बाट उत्पादन हुने आधा विजुली खेर जाने
10/27/2016 12:46:00 PM आर्थिक
काठमाडौं,कार्तिक ११ गते । कात्तिक महिनाभित्रै गोर्खाको मुच्चोकस्थित दरौंदी खोलाबाट ६ मेगावाट विजुली व्यावसायिक उत्पादन हुने भएको छ । कालिका पावर कम्पनीले १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको लागतमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।
आयोजनाको विद्युत् व्यावसायिकरुपमा उत्पादन सुरु भएपछि गोरखाभर लोडसेडिङ नहुने बताइएको छ ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गोर्खा बजारको सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सर्फमरको क्षमता ३ मेगावाटको मात्रै भएकाले आयोजनाबाट प्राधिकरणले ३ मेगावाट मात्रै विजुली किन्ने भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणले सोे सवस्टेसनलाई क्षमता बढाएर ८ केभीए क्षमताको बनाउने काम सुरु गरिसकेको छ । ‘सबस्टेसनको क्षमता विस्तार हुन केही महिना लाग्ने भएकाले यो आयोजनाबाट उत्पादिन आधा विजुली त्यसै खेर जाने भएको हो,’ कालिका पावरका सञ्चालक पदम गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।
आयोजनाले दशैं अघिदेखि नै विभिन्न चरणमा परिक्षण उत्पादन गरिरहेको छ । आगामी एक हप्ताभित्र परिक्षण उत्पादन सम्पन्न गरी विद्युत प्राधिकरको गोर्खा सबस्टेसनमा जडान गरिने आयोजना निर्माण गर्ने गुरुङले बताए ।
‘असोज २२ गतेदेखि परिक्षण उत्पादन सुरु गरिरहेका छौं । आगामी एक हप्तामा परिक्षण उत्पादन पुरा गरिने छ । र, त्यसपछि १५ दिन विद्युत प्राधिकरणलाई पि|mमा दिन्छौं,’ गुरुङले भने, ‘कात्तिक अन्तिमदेखि व्यावसायिकरुपमा आयोजनाको बिजुली बल्छ ।’
आयोजनाबाट उत्पादित विजुली विद्युत प्राधिकरणले हिउँदमा प्रतिमेगावाट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्खायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको छ ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले एक वर्ष ढिलो
तीन वर्षअघि सुरु भएको आयोजना गत वर्ष नै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण आयोजना निर्माण गर्न एक वर्ष ढिलो भएको उनले जानकारी दिए ।
यो आयोजनाको निर्माणस्थल ०७२ बैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्पको केन्द्रविन्दू बारपाकबाट २० किलोमिटर दक्षिण र गोरखा बजारबाट ५० किलोमिटर उत्तरमा पर्छ । ‘त्यत्रो ठूलो भूकम्प जाँदा पनि आयोजनाको भौतिक संरचनामा भने कुनै असर गरेन,’ उनले भने ।
१ अर्ब २५ करोड लागत
आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको गुरुङले बताए । आयोजना स्थलबाट गोर्खा बजारमा रहेको प्राधिकरणको सब स्टेसनसम्म पुर्‍याउन १८ किलोमिटर लामो ३३ केभीए क्षमताको प्रसारणलाई आयोजना स्वयंले निर्माण गरिसकेको छ ।
प्रसारणलाइन निर्माण गर्न साढे ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको सञ्चालक गुरुङले बताए । आयोजनाको पावर हाउस चनौटेमा निर्माण गरिएको छ ।
हिउँदमा २ मेगावाट मात्रै
यो आयोजनाको प्रकृति रन अफ दि रिभर भएकाले वर्खायाममा ६ मेगावाटसम्म र हिउँदमा त्यसको ४० प्रतिशत अर्था २ मेगावाट मात्रै विजुली उत्पादन हुने सञ्चालक गुरुङले जानकारी दिए ।
१० मेगावाटको अर्को आयोजना बनाइँदै
यो आयोजनाबाट व्यावसायिकरुपमा विद्युत उत्पादन भएको केही महिनाभित्र दरौंदी खोलामै १० मेगावाटको अर्को आयोजना निर्माण थाल्ने गुरुङले जानकारी दिए ।
‘आगामी केही महिनाभित्रै १० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको तल्लो दरौंदी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विद्युत विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति पाइसकेका छौं ।’-पुष्प दुलाल , अनलाइनखबर
निमोनियालाई नाग लागेको, प्रेसर बढेकोलाई पिचाश !
10/27/2016 12:40:00 PM स्वास्थ्य
नमस्कार आमा ! के समस्या लिएर आउनुभएको ? (हातको निलो डाम देखाउँदै) जान्नेले भनेको बोक्सीले टोकेको रे बाबु ! दुइ वटा भाले चडाइसके अझै निको भाछैन । हेर्नुस आमा बोक्सी भन्ने हुँदैन, रगतको अथवा रक्तनलीको कुनै रोग हुन सक्छ । तपाईले कुनै औषधीहरु खानु भएको छ ? छैन बाबु केही खाएको छैन ।
रगत जाँच्नु पर्छ आमा । हस् बाबु त्यसो भए जाच्नुस् मेरो रगत ।
एक घण्टापछि ः आमा रिपोर्ट आयो । तपाईलाई बधाई छ, रोग केही पनि देखिएन । सायद तपाईलाई थाहा नपाउने गरी चोट लागेको हुनुपर्छ । गाउँघर तिर मेलापात गर्दा वा सुत्ने बेलामा हात कतै ठोकिएको हुनुपर्दछ । खै बाबु, त्यस्तो त केही थाहा भएन । २÷३ हप्तापछि फेरी भेट्न आउनुहोला आमा । त्यस वेलासम्म निलो डाम नहराएमा वा बढेमा थप जाँच गर्न ठुलो अस्पताल जानुपर्छ । जानुअघि तपाईलाई केही भन्नुछ आमा ?
‘बाबु ! किन–किन मलाई त बोक्स मै शंका छ’ उनले भनिन् ।
मैले काम गर्ने अस्पताल नजिकै झारफुक गर्ने (जान्ने) एक महिला बस्छन् । विहानदेखि साँझसम्म ठुलो भिड लाग्छ । जस्तो बिरामी गएपनि निधारमा खरानी रंगको टिका र कम्मरमा बुटी लगाइदिने रैछिन । अचम्म त के भने, मेरै अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी पनि सुरक्षा गार्डको आँखा छलेर सुटुक्क उनी कहाँ जाँदा रैछन् । साँझ राउण्ड गर्न जाँदा धेरैको निधारमा उनै जान्नेको टिका देखिन्थ्यो । मैले भनें ‘तपाईहरु झारफुकको लागि बाहिर जानुभएको रहेछ । अस्पतालका कर्मचारी कसैलाई थाहा नै नदिई यसरी जानु हुँदैन । हेर्नुहोस्, तपाईहरुको झारफुक प्रतिको विश्वासलाई हामीले विरोध त गर्दैनौ तर अस्पतालमा भर्ना भएको अवस्थामा विना जानकारी कतै नहिँड्नुहोला ।’ मैले जिज्ञासा सहित सोधें, ‘जान्नेले के भन्नुभयो त ? निमोनिया भएको बिरामीको आमाले भनिन् “नाग लागेको छ रे”। मैले सोचें, अशिक्षा र अन्धविश्वासले गाँजिएको समाजको दोष हो यो, उहाँहरुको होइन ।’
जसले स्वास्थ्य सम्बन्धि केही अध्ययन गरेका हुँदैन, रोगको ए वि सि डी थाहा हुँदैन, उनीहरुलाई जान्ने भनिन्छ। भmारफुक गर्नेहरुको भरपर्दा धेरै बिरामीहरुको अकालमा मृत्यु भएको छ । झाडापखाला लागेका बिरामीलाई पानी र जीवनजल नखानु यसले झन् पखाला बढ्छ भन्दा रैछन् । निमोनियाका बिरामीलाई नाग लागेको भन्दा रैछन् । अनि मानसिक रोगीलाई भुतप्रेत लाग्यो देवी चढ्यो पुजा गर्नुपर्छ ठीक हुन्छ भन्दा रैछन् । प्रेशर बढेर बेहोश हुँदा पिचाशले ढालेको म पिचाश भगाउँछु भनेर ढ्याङ्गरो ठोक्दा रैछन् । आदि–आदि । धेरै ठाउँमा, खास गरी गाउँघर तिर रोगले धेरै नै चापेपछि बल्ल अस्पताल जाने चलन छ ।
एउटा पेट दुखेको बिरामीलाई झारफुक गर्नेले ३ दिनसम्म घरमा फुकेर राखेछ । जव चौथो दिनसम्म बीसको उन्नाइस भएन, बिरामीलाई अस्पताल पु¥याइयो । अस्पतालमा परीक्षण गरेपछि एपेन्डीक्स फुटेर पेटमा पिप जमेको पाइयो । तुरुन्त अप्रेशन नगरे यस्तो बिरामीको ज्यान जान सक्छ ।
ग्याष्ट्रिकलाई गाउँघरमा गानो गोला पनि भनिदो रैछ । प्हिले झारफुक गर्ने, निको नभए गानो गोला मिच्ने भनेर पेट रगड्ने गर्दा रैछन् । पेट दुखेर आएको एक दुब्लो पातलो बिरामीलाई मैले इमर्जेन्सीमा जाँच गरेको थिए । उनको पेट फुलेको र जता थिचे पनि दुख्ने थियो । उनलाई पनि गानो गोला भनेर पेट मिचि दिइएको रहेछ । मैले तुरुन्तै बुझिहाले, पेट बेस्सरी माड्दा आन्द्रा ढाडको हड्ढीमा रगडियो र आन्द्रामा प्वाल प¥यो । यस्तो अवस्थामा पनि तुरुन्तै अप्रेशन नगरिए बिरामीको ज्यान जान्छ ।
यी त भए देखिएका घटनाहरु । यस्ता घटनाहरु समाजमा कति लुकेका होलान्, कतिले अकालमा ज्यान गुमाएका होलान् । कोही बिरामीहरु झारफुकमा विश्वास गर्न वाध्य पनि छन् । आफ्नो घर देखि स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न १–२ दिन लाग्छ । स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पताल पुग्न धेरै समय र खर्च लाग्छ । खास गरी पहाडी र हिमाली भेगका जनताहरु आधुनिक स्वास्थ्य सेवाबाट धेरै टाढा छन् । विकट ठाउँमा छरिएका सबै गाउँमा स्वास्थ्य केन्द्र र डाक्टर उपलब्ध गराउन असम्भव जस्तै छ । सरकारले चाहेमा विकट ठाउँका बस्तीहरुलाई एकिकृत गरी अल्ली सुगम ठाउँमा बासस्थानको व्यवस्था गर्न सक्छ । यसबाट धेरै भन्दा धेरै जनताले नजिकको स्वास्थ्य सेवा र बाटोघाटोको प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
झारफुक गर्नेहरुलाई एकैचोटी विस्थापित गर्न असम्भव छ । उनीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य तालिम दिन सकिएमा बिरामीमा खतराका लक्षण देख्न साथ डाक्टरलाई रिफर गर्न सक्छन् । यसो गर्दा बिरामीलाई फाइदा पनि हुन्छ अनि झारफुक गर्नेहरुले रोगको बारेमा थप बुभm्न पनि पाउछन् । जब उनीहरुले तालिम पाउँछन् । रोगको गहिराई बुझ्छन् । सायद धेरैले आफ्नो झारफुके पेशा छोड्छन् । किनकि रोगको गाम्भीर्यता नबुझी उपचार गर्दा र बुझेपछि गर्दा चेतनामा फरक आउन सक्छ । मैले त यस्ता खतरनाक रोगहरु पनि फुकेर बसेको रैछु, अब यो झारफुके पेशाा छोड्छु भन्न सक्छन् ।
एक दिन मैले अस्पताल नजिक बस्ने ति जान्ने महिलालाई भेट्ने अवसर पाएँ । घाँटी दुखेर जँचाउन आएकी थिइन् । एक हप्तादेखि घाँटी दुखेर सताएको रैछ । जाँचेपछि घाँटीको संक्रमण (फ्यारीनजाइटिस) जस्तो लागेर औषधी खाने सल्लाह दिएँ । एक हप्तापछि फेरि आउन भनं । त्यत्तिकैमा उनीसँग कुरा गर्न मन लाग्यो । तपाईं त धेरै प्रख्यात हुनुहुन्छ । मैले तपाईको बारेमा धेरै सुनेको छु । तपाई झारफुकमा धेरै ब्यस्त हुनु हुँदो रैछ । उनले भनिन् ‘हजुर डाक्टरसाव, व्यस्त हुन्छु, विश्वास गरेर आउँछन । मैले थपे, अनि निको हुन्छ त ? ‘निको हुन्छ भन्छन् डाक्टरसाव,’ उनले भनिन् ।
एक हप्तापछि फेरी उहाँसँग भेट भयो । घाँटी पुरै निको भएको रैछ । घाँटी निको भएकोमा उनले धन्यवाद दिइन् । धन्यवाद भनिरहनु पर्दैन दिदी, तपाईंलाई निको भयो म धेरै खुसी छु, मैले भनें । मैले ति झारफुक गर्ने दिदीलाई घाँटीको इन्फेक्शन कसरी हुन्छ, कुन किटाणुहरुले संक्रमण गर्छन, रोग कसरी सर्छ उपचार कसरी हुन्छ भनेर सबै सम्झाएँ । उनी अल्ली भावुक भइन् । सायद उनी रोगको गहिराई बुझेपछि झस्किन् । खुशीको कुरा आजकाल उनीले बिरामीको समस्या बढेमा तुरुन्त अस्पताल रिफर गर्न थालेकी छन् ।
डाक्टरले केही अपवाद बाहेक सबै रोगहरुका कारण पत्ता लगाएर उपचार गर्छन् । रोगको बारेमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने भएकोले डाक्टरहरु बिराम्ीको उपचारको लागि आधिकारिक व्यक्ति ठहरिन्छन् । रोगको निदान गर्न बिरामीसँग वार्तालाप गर्ने, छामेर परिक्षण गर्ने, आवश्यक ल्याव जाँच गर्ने डाक्टरहरुको नियमित विधि हो ।
तथ्यमा आधारित उपचार अर्थात् इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन डाक्टरहरुले अगाँलेका हुन्छन् । विभिन्न अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका विशिष्ट उपचार शैली चिकित्सकले अपनाएका हुन्छन् । जसले गर्दा रोगहरु अधिकतम रुपमा नियन्त्रित भएका हुन्छन् । दिनहुँ नयाँ–नयाँ उपचार शैलीको अनुसन्धान भइरहेको हुन्छ । एउटै रोगको पनि फरक फरक उपचार शैली हुन सक्छ । डाक्टरहरुले सबैभन्दा उपयुक्त विधि अपनाउने गर्छन् ।
अरु पेशा जस्तो डाक्टरलाई को राम्रो को नराम्रो भन्न गाह्रो हुन्छ । जस्तैः डिजाइन गर्ने आर्किटेक्ट इन्जीनियरले राम्रो भवन निर्माण ग¥यो भने उसलाई राम्रो भन्न सजिलै सकिन्छ । एउटा लेखकले धेरै बिक्ने किताब लेखेमा उसलाई राम्रो लेखक मानिन्छ । यदि कुनै डाक्टरले धेरै बिरामीलाई उपचार गर्छ भने उसैलाई राम्रो भनि हाल्न सकिदैन किनकि सबैको सफल उपचार हुन्छ भन्ने पनि छैन । यदि कसैसँग रोग पत्ता लगाउने कुशलता बढी छ भने त्यो डाक्टरलाई पनि राम्रो भनि हाल्न सकिदैन, किनकी पत्ता लगाएका रोगहरु सबै उपचार नहुन पनि सक्छन् । कसैले बिरामीसँग धेरै मिठो बोल्लान्, इमान्दार पनि बन्लान् तर रोगको सही उपचार गर्ने क्षमता नभए ती गुणहरुले डाक्टरलाई राम्रो भनाउन पनि सक्दैन । कामको अन्तिम नतिजालाई हेरेर अरु पेशा कर्मीहरुलाई सजिलै राम्रो नराम्रो भन्न सकिए पनि डाक्टरलाई माथि उल्लेखित सबै गुणहरुको मिश्रण नभएसम्म यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्न गाह्रो हुन्छ ।
राम्रो डाक्टर बन्न उसमा पढाइको निखारता, इमान्दारिता, सक्षमता, गाम्भीर्यता, दया, मायाका साथै बिरामीका सबै पिडा सुन्न सक्ने धैर्यवान कान चाहिन्छ । हामीहरु यी सबै गुणहरु आफुमा निहित गर्न हर प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ । तर कहिलेकाहिँ हामी चिप्लिन्छौँ । कहिले पढाइको निखारता छुट्छ, कहिले इमान्दारिता छुट्छ, कहिले सक्षमता टुट्छ, कहिले गाम्भीर्यता टुट्छ, कहिले दया, मायाको भाव टुट्छ भने कहिले बिरामीको केही कुरा सुनेपछि हाम्रो कान बन्द हुन्छ ।
हो, सबै मानिसहरु सर्वगुण सम्पन्न हुँदैनन् । त्यसो भन्दैमा हामी डाक्टरहरुलाई त्यो छुट हुँदैन । किनकी हाम्रो पेशा सम्वेदनशील छ । हामी मृत्युसँग दिनहुँ जुहारी खेलेका हुन्छौँ । मिडियामा बेलाबेलामा डाक्टरहरुको गाम्भीर्यता घटेको छ भन्ने कुरा आउने गर्छन् । यसमा आंशीक सत्य पनि छ । अब हामीले आफ्नो गाम्भीर्यतालाई बढाउनै पर्छ । हामीले यस्तो प्रयाश गरिरहँदा कहिले काँही हामी निराश हुन वाध्य हुन्छौँ । राम्रो उपचार को प्रयास गर्दागर्दै कसैको मृत्यु भएमा डाक्टरहरु प्रति हमला हुन्छ । ठुलो मानसिक दवावमा काम गर्नुपर्ने वातावरण बढ्दै गएको छ । डाक्टरहरु पनि मान्छे हुन्, मानवीय गल्ती हुन सक्छ तर घटनाको अनुसन्धान निचोडमा नपुगी डाक्टरलाई तुरुन्तै दोशी ठह¥याउनु राम्रो होइन । जति प्रहार भएपनि डाक्टरहरुले आफ्नो कर्तव्य इमान्दारिता पूर्वक निभाउने छन् । किनकी बिरामीको उपचार गर्नु नै डाक्टरको एक मात्र उद्देश्य हो ।
जति डाक्टर र बिरामी विचको सम्बन्ध मजबुत बन्न आवश्यक छ त्यति नै डाक्टर र डाक्टर बीचको सम्बन्ध सुमधुर बन्न आवश्यक छ । डाक्टर–डाक्टर बिच सुचनाको तालमेल नमिल्दा र व्यवसायिक धर्म घट्दा बिरामीहरुले अनाहकमा दुःख पाएका घटना धेरै छन् ।
उदाहरण १ ः
बिरामी ः डाक्साब नमस्ते ! मलाई टाउको दुखेको १ वर्ष भयो, सिटि स्क्यान, एम आर आई
सबै गरिसके, औषधी १ वर्ष देखि खाएको छु, औषधी छोड्ने बित्तिकै फेरी दुख्छ ।
डाक्टर ः ए तपाईलाई माइग्रेन हेडेक भएको हुनुपर्छ । पहिलेको डाक्टरले दिएको औषधी काम
लाग्दैन । अब यो खानुु् (औषधी लगभग एउटै)
उदाहरण २ ः
बिरामी ः डाक्साब नमस्ते ! मलाई प्रेशर भएको ६ महिना भयो । पहिलेको डाक्टरले यो
औषधी दिनु भएको छ । यो औषधी ठिक छ कि छैन ?
डाक्टर ः छैन, त्यो बन्द गर्नुस् यो खानुस् (अर्काे कम्पनीको दिँदै)
उदाहरण ३ ः
बिरामी ः पेट दुखेको छ डाक्साब हिजो देखि ।
डाक्टर ः (सबै रिर्पाेट आएपछि) तपाई लाई ऐपेन्डीसाइटिस भएको हुन सक्छ तर अहिले ठ्याक्कै भन्न गाह्रो छ । आज रातभरी अस्पतालमा बस्नुस्, दुखाई बढेमा वा दुखाइ दाहिने तर्फ सरेमा अप्रेसन गर्नुपर्छ ।
बिरामीको पेट दुखाई कम नभएर अर्काे अस्पताल जान्छ ।
उदाहरण ४ ः
डाक्टर २ ः तपाईको एपेन्डीक्स धेरै पाकि सकेछ, किन हिजो नै नआउनु भएको ?
बिरामी ः हिजो त्यो अर्काे अस्पतालको डाक्टरले रातभरी राख्नुभयो ।
डाक्टर २ ः कस्तो डाक्टर रैछ ! धन्नै तपाईको ज्यान गएको, धन्न ठाउँमा आउनु भएछ ।
यी माथिका दुखद उदाहरणहरुले के देखाएका छन् भने डाक्टर–डाक्टर विचको सम्बन्ध विग्रेको छ । राम्रै औषधी भएपनि औषधीलाई झट्ट फेरिदिने, अघिल्लो डाक्टरलाई गाली गरिहाल्ने र कहिले काही बिरामीलाई त्यहाँ किन गएको भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने प्रबृत्ती बढेको छ । यस्तो प्रबृत्ती अहिलेको दरमा बढेमा डाक्टर–डाक्टर बीचको सम्बन्ध छिट्टै नै धरापमा पर्नेछ । औषधी फेर्न नै पर्ने रैछ भने पनि बिरामीलाई राम्रोसँग सम्झाएर फेर्दा हुन्थ्यो नि ।
हामीमा आमुल परिवर्तनको खाँचो छ । आफु र आफ्नो पेशााको मर्यादा बचाउन अब हामी डाक्टरहरुले फेरी हिप्पोक्र्याटिक ओथ सम्झिन आवश्यक छ । आफ्नो पेशालाई इमान्दारी पुर्वक निभाएका तमाम डाक्टर साथीहरु प्रति यी माथिका भनाई भने लागु हुँदैनन् ।
स्टेज चार भएको क्यान्सरको बिरामी आफ्नो दुखाई कम गर्न अस्पताल आउने गर्थे । धेरै दुख्दा कहिलेकाहिँ रातभरी पनि बस्थे । पेनकिलरको डोज जति बढाए पनि उनको दुखाई खासै कम हुँदैनथ्यो । धेरै दिनपछि उहाँलाई धेरै गाह्रो परेछ । श्वास फेर्न पनि गाह्रो हुने, दुखाई खप्न नसकिने, टाउको दुखिरहने भएछ । अक्सिजन तथा पेनकिलर दिइयो । त्यहि बेला उहाँले सोध्नु भो ! डाक्टर बाबु तपाईलाई भगवानप्रति विश्वास छ ? मैले कुरा मोडेर उहाँको रोगको बारेमा बताउन लागें । हेर्नुस बुबा, तपाईको क्यान्सर शरीरभरि फैलिसकेको छ, त्यो कुरा तपाइलाई क्यान्सरको डाक्टरले पनि भन्नुभएको रैछ । यसरी फैलिएको क्यान्सरलाई निर्मुल पार्न सकिदैन । क्यान्सरलाई दवाउन केमोथेरापी र आवश्यकता अनुसार रेडियोथेरापी दिने हो, जुन तपाईले पाइसक्नु भएको छ । अब बाँकी रह्यो तपाईको दुखाई, यो दुखाईलाई पेन किलर दिएर कम गर्ने हो । श्वास फेर्न गाह्रो हुँदा अक्सिजन दिने हो ।
बाबु यो कुरा सबै मैले बुझिसकेको छु । बाबुले उत्तर दिनुभएन । तपाईको भगवान प्रति विश्वास छ ? तुरुन्तै जवाफ फर्काउन सकिनँ । एकै छिनको मौनता पछि मैले भने “अँ छ ” उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो । सायद उहाँको भगवान प्रतिको विश्वास मेरो उत्तरले झन् मजवुत बन्यो । दुई दिनपछि खवर पाए उहाँ वित्नुभएछ । मैले त्यति बेला उहाँको विश्वासलाई थप मजवुत बनाउन भगवान मा विश्वास गर्छु भनेको थिएँ । यथार्थमा मैले भगवानमा विश्वास राख्दीनँ, राख्छु केवल आस्था मात्र । किनकी विशवासमा विश्वासघात पनि हुन सक्छ, आस्थामा त्यो हुँदैन ।
भगवानलाई कसैले भेट्न सकेको छैन, किनकी भगवान खोजेर भेटिने चिज होइन । भगवान त आफु भित्र हुन्छ । आफूभित्र रहेको भगवानलाई बाहिर खोच्दा भेटाउने कुरै भएन । भगवानले मेरो रोग निको पारिदिन्छन भन्नु भनेको आफु भित्रको शक्तिले निको पार्छन् भन्नु हो । आफूभित्रको शक्ति अर्थात रोगसँग लड्ने क्षमता, धैर्यता र विश्वास । जव यी गुणहरु मान्छेमा घट्छन् र औषधीले काम गर्न छोड्छ । बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।-स्वास्थ्य खबरपत्रिका
हरेक काम दोहोर्‍याएर गर्नुहुन्छ ? ओसिडी हुनसक्छ
10/27/2016 12:31:00 PM स्वास्थ्य
केही दिनअघि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा एक महिला डा. सरोजराज वझाकहाँ पुगिन् । उमेरले ३० वर्ष हाराहारीमा देखिने उनको बानी थियो, हरेक काम दोहोर्‍याएर गर्ने ।
यही बानीका कारण उनको दैनिक जीवनका साथै वैवाहिक सम्बन्धमा समेत असर परेको थियो । कतिसम्म भने, कुरा डिभोर्ससम्म पुगेको थियो । उनको मनमा सधै एउटै मात्र कुरा खेल्थ्यो, ‘मर्ने’ । उनी सोच्थिन्, ‘जीवन यति नीरस भइसकेको छ, अब केही बाँकी छैन ।’
उनी सात वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आएकी थिइन् । पछि उनका श्रीमान् पनि अस्ट्रेलिया पुगेका थिए । केही वर्ष त उनीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध सुखमय नै रह्यो । तर, विस्तारै उनको बानीका कारण श्रीमान्सँग मनमुटाव सुरु हुन थाल्यो ।
कारण थियो, बाथरुममा एक घण्टा हराउने उनको बानी । हरेक पटक बाथरुम जाँदा उनी एक घण्टा लगाउँथिन् । बाथरुममा रहेका हरेक सामान उनलाई यथास्थानमै चाहिन्थ्यो । कुनै सामान दायाँ-बायाँ भयो कि उनी तत्काल गन्न थाल्थिन् ।
त्यति मात्र हैन, घरमा कोही पाहुना आइहालेमा उनलाई घर फोहोर होला भन्ने चिन्ताले निकै सताउँथ्यो । कतिसम्म भने, घरमा कोही पाहुुना आएमा उनी सोफाको खोल, तन्ना सबै झिकेर धुन थाल्थिन् । आफू कतै गएर घर आउनासाथ हात धुन थाल्थिन् ।
आफ्नै मनबाट उत्पन्न भएको विचार दोहोरिने समस्यालाई ‘ओसिडी’ (अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिस्अर्डर) भनिन्छ । आम जनमानसमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म देखिने यो समस्या मानसिक रोगमध्येको चौथो ठूलो हो
परिवारका सदस्यले यी लक्षणलाई सुरुमा त सामान्य रुपमै लिएको थियो । तर, यो क्रम दिनानुदिन बढ्न थालेपछि भने परिवारमा कलह बढ्यो । फलस्वरूप उनी श्रीमान्सँग बस्न नसकेर नेपाल फर्किइन् । उनको मुद्दा अहिले अदालतमा छ ।
उनी हाल माइती पक्षका साथ काठमाडौमा बस्दै आएकी छिन् । उनको माइतीले पनि यी लक्षणलाई सुरुमा त सामान्य रुपमै लिएको थियो । तर, समस्या देखिएपछि अन्ततः परिवारकै सदस्यको सुझावमा सामान्य उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल पुर्‍याइएकी उनलाई लामो समयदेखि ‘ओसिडी’ (अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिस्अर्डर) अर्थात् विचार दोहोरिने रोग भएको पत्ता लाग्यो ।
उनी हाल अस्पतालका चिकित्सकको सल्लाहमा उपचार गरिरहेकी छिन् । चिकित्सक भन्छन्, नियमित औषधी सेवन तथा विहेवियर थेरापी मार्फत यो रोग सजिलै निको हुन्छ । त्यसको लागि रोगको पहिचान गर्न जरुरी छ ।
आफ्नै मनबाट उत्पन्न भएको विचार दोहोरिने समस्यालाई ‘ओसिडी’ (अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिस्अर्डर) भनिन्छ । आम जनमानसमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म देखिने यो समस्या मानसिक रोगमध्येको चौथो ठूलो हो ।
यो रोग लागेका मानिसको दिमागमा एउटै कुरा लगातार दोहोरिने गर्छ । यदि उसले दिमागमा खेले अनुसारको काम दोहोर्‍याउन नपाए निकै असहज महसुस गर्छ । सो काम नगरुञ्जेल अरु काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छ । सो काम गरेपछि उसलाई केही समयको लागि सहज महसुस त हुन्छ, तर निश्चित समयपछि उसको दिमागमा फेरि त्यही कुरा दोहोरिन थाल्छ ।
विचार दोहोरिने समस्या जो कोहीलाई हुन सक्छ । यदाकदा त्यस्तो हुनु चिन्ताजनक विषय होइन । त्यसैले कसैमा यस्ता समस्या देखा पर्नासाथै आत्तिनु पर्दैन । तर, यस्तो समस्या बारम्बार देखिएमा भने विशेष ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । यदि त्यसले तपाईंको दैनिक कार्यमै असर परेको छ भने मनोचिकित्सकसित परामर्श गर्नुपर्छ ।
यदि कुनै व्यक्तिलाई एकै किसिमको विचार दोहोरिने गर्छ र उसले त्यो विचारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दाखोज्दै पनि सम्भव हुँदैन भने त्यो ओसिडीको लक्षण हो । यस्तो लक्षण २० वर्ष मुनिका मानिसमा पनि देखिन सक्छ । यो लक्षण भएका दुई तिहाई मानिसमा डिपे्रशनको सम्भावना बढी हुन्छ ।
यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरु विचार अनुसारको व्यवहार देखाउँदै एउटै काम बारम्बार दोहोर्‍याउने गर्छन् । जस्तै, हात धुने, लुगा धुने, सामान गन्ने, प्रयोग गरिएका सामान सही ठाउँमा भए-नभएको याद गरिरहने आदि
यस्ता लक्षण देखा पर्ने प्रमुख दुई कारण हुन्छ, एउटा वंशाणुगत र अर्को मस्तिष्कबाट निस्कने रसायनिक पदार्थमध्ये सेरेटोनिनको कमीका कारण । कसैकसैमा व्यक्तिको स्वभावले पनि यस्तो लक्षण दर्शाउने गर्छ ।
यस्ता लक्षण भएका व्यक्तिहरु विचार अनुसारको व्यवहार देखाउँदै एउटै काम बारम्बार दोहोर्‍याउने गर्छन् । जस्तै, हात धुने, लुगा धुने, सामान गन्ने, प्रयोग गरिएका सामान सही ठाउँमा भए-नभएको याद गरिरहने आदि ।
यो रोग भएका व्यक्तिमा डिप्रेशनको खतरा बढी हुन्छ । जसले गर्दा कतिपय मानिस आत्महत्या गर्न अग्रसर हुन्छन् । यदि कोही मानिसलाई ओसिडी मात्र छ भने त्यसले खासै असर गर्दैन । तर, डिप्रेशन पनि देखिएमा भने भयावह स्थिति निम्तिन सक्छ ।
तनावका कारण ओसिडी भएमा पनि त्यसले समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, परिवारमा कसैले आत्महत्या गरेको छ र त्यसकै कारण परिवारको कुनै सदस्यमा ओसिडी देखियो भने पनि उसमा ‘मर्ने’ विचार बारम्बार उत्पन्न हुन गई आत्महत्याको सम्भावना बढ्दै जान्छ ।
हुन त एक तिहाई मानिसमा यो रोग स्वतः निको हुन्छ । त्यस्तै तीन जनामध्ये एक जनामा यो रोग लामो समयसम्म देखा पर्छ र डिप्रेशनका कारण आत्महत्याको जोखिम निम्तिन्छ । बाँकीलाई भने यो समस्या मध्यम खालको हुन्छ ।
खासगरी, पारिवारबाट सहयोग नपाएमा यो रोगले कडा स्वरुप लिन सक्छ । परिवार र समाजको साथ कम छ र व्यक्तिमा डिप्रेशनको लक्षण बढी छ भने उसलाई चिकित्सकको उपचार अनिवार्य हुन्छ ।
(यो लेख मनोचिकित्सक प्रा.डा. सरोजराज वझासितको कुराकानीमा आधारित छ । उनी हाल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा मनोचिकित्सा विभागका प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन् ।)-अनलाइनखबर
देशभर डेंगु संक्रमितको संख्या ४९९ पुग्यो
10/27/2016 12:27:00 PM स्वास्थ्य
काठमाडौं, कार्तिक ११ गते । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा डेंगुबाट प्रभावित हुनेको संख्या हालसम्म ४ सय ९९ पुगेको छ । संक्रमित हुनेमा सबैभन्दा धेरै चितवनको रत्ननगरमा ३ सय ६७ जना छन् ।
झापामा सय जना डेंगु संक्रमित रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।
त्यसबाहेक कैलाली, कञ्चनपुर, रुपन्देही, पर्सा, सप्तरी, कास्की, काभ्रे, धादिङ, स्याङ्जा, काठमाडौं, ललितपुरलगायतका डेंगु प्रभावित १३ जिल्लाहरुमा संक्रमित हुनेको संख्या एक-एक रहेको छ ।
डेंगु प्रभावित ती जिल्लाहरुमा डेंगु सार्ने लामखुट्टेको लार्भा नष्ट गर्न महाशाखाले ‘सर्च एण्ड डिस्ट्रोई’ अभियान नै चलाएको छ । विगत तीन दिनदेखि जारी सो अभियानलाई विहीबारदेखि झापाकोे दमकमा पनि विस्तार गरिएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले आइतबार मातहतका निकायलाई डेंगु नियन्त्रणका लागि विशेष अभियान चलाउन निर्देशन दिएपछि महाशाखाले विशेषज्ञ टोली प्रभावित जिल्लामा पठाएको हो ।
टोलीले विहीबार विहानैदेखि झापाको दमकमा पनि डेंगु सार्ने लामखुट्टेका लार्भा नष्ट पार्ने अभियान सुरु गरिसकेको छ । त्यसैगरी, चितवनको रत्ननगर पुगेको टोलीले पनि लार्भा नष्ट पार्ने काम गर्दै आएको छ ।
डेंगु प्रभावित जिल्लाहरुमध्य चितवन तथा झापामा लार्भा नष्ट पारेसँगै ती क्षेत्रमा भएको डेंगु संक्रमणको घटना अबको १०/१२ दिनभित्रै नियन्त्रणमा आउने विश्वास गरिएको छ ।
तराईका केही जिल्लाहरुमा डेंगुको संक्रमण बाह्रै महिना हुनेे गर्दछ । जबकी अन्य जिल्लाहरुमा भने वर्षा अवधिभर तथा वर्षा सकिएको झण्डै एक महिनासम्म डेंगु सार्ने लामखुट्टे सक्रिय रहने गर्दछन् ।
‘नेपालमा पानी पर्ने क्रम भर्खरमात्र बन्द भएकाले यसको संक्रमण यो मौसममा बढी देखिएको हो,’ महाशाखा प्रमुख डा. भीम आचार्यले भने, ‘सम्भवतः अबको १०/१२ दन भित्रमै यो नियन्त्रणमा आउनेछ ।’ उनले त्यतिबेलासम्मका लागि उचित सावधानी अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।
त्यसो त यो संक्रमण पहिलेको तुलनामा यसपालि बढेको हो । करिब ६ वर्ष पहिले चितवनमै मात्र डेंगुबाट प्रभावित हुनेको संख्या नौ सय पुगेको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा यसबाट संक्रमित हुने संख्यामा सुधार आएपनि यो वर्ष तराईको चितवन तथा झापामा डंेगुको प्रभाव बढी देखिएको छ । यद्यपी महाशाखाले हालसम्म डंेगुबाट कसैकोे मृत्यु नभएको जनाएको छ ।
डेंगु जाँच गर्ने किट अभाव
गत वर्ष नेपालमा डेंगु संक्रमणको संख्या कम भएकै कारण न्युन मात्रा किट खरिद गरिएकोमा यस वर्ष त्यसको संक्रमण धेरै भएकै कारण समस्या उत्पन्न भएको महाशाखाले जनाएको छ । गत वर्ष खरीद गरिएको किटको म्याद सकिएकाले त्यसलाई नष्ट गरिएको छ ।
महाशाखा स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘पहिले सामान्य ज्वरो आएका सबै बिरामीमा किट प्रयोग गरी परीक्षण गरिन्थ्यो । तर अहिले पर्याप्त नभएकाले त्यसो गर्न छाडिएको छ ।’
यद्यपी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले भने नेपालमा किट अभाव भएपनि बिरामीको जाँच नै रोकिने अवस्था भने सिर्जना भइनसकेको जनाएको छ ।
महाशाखा प्रमुख डा. भीम आचार्यका अनुसार महाशाखा लगायत मातहतका निकायमा किट संख्या यति नै छ भन्ने यकिन तथ्यांक त छैन । ‘तर त्यसैको कारणले उपचार रोक्नुपरेको पनि छैन,’ डा. आचार्यले भने ।
उनले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय अस्पताल लगायतको सहयोगमा विशेष किसिमको लक्षण भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र उक्त किट प्रयोग गर्दै आएको बताए ।
उनले अनलाइनखबरसित भने, ‘किट अभावकै कारण अहिले हामीले रगतमा एक लाखभन्दा कम प्लेटलेट्स हुनेलाईमात्र डेंगुको परीक्षण गर्न मातहतका स्थानीय अस्पतालहरुलाई अनुुरोध गरेका छौं ।’-अनलाइनखबर
देखिएका लोकमान भर्सेज नदेखिएका लोकमान
10/27/2016 12:22:00 PM विचार
चार वर्षदेखि म सरकारी कर्मचारी छु । सरकारले मलाई दिने तलब र मेरै तहका अन्य कर्मचारीलाई दिने तलब स्केल बराबर हो । सरकारी जागिरे हुनुअघि जहाँ जस्तो अवस्थामा थिएँ, त्यसयताका लगभग उस्तै अवस्थामा दैनिकी गुजार्दै छु ।
काठमाडौंको महँगीमा जेनतेन चलेको छ दैनिकी । तर, मेरै तहका साथीले त्यही तलब स्केल खाएर आर्थिक फड्को मारेको देख्दा अचम्म लाग्छ । उनीहरु सानको जिन्दगी बिताइरहेका छन् ।
सरकारले तोकेको त्यही वेतनबाट म जस्ता एकथरि कर्मचारी सस्तो तरकारी कहाँ पाइन्छ भन्दै खोज्दै हिंड्नुपर्ने अवस्थामा छौं भने त्यही तलबबाट सस्तो घरजग्गा कतातिर पाइन्छ भन्दै खोज्नेहरुको जमात पनि छ ।
यो अन्तर जहिलेसम्म कायम रहन्छ, त्यतिबेलासम्म भ्रष्टाचारको जालो हट्दैन ।
अहिले मिडियामा लोकमान कार्कीको निकै चर्चा, आलोचना र बदख्वाइँ भइरहेको छ । पछिल्लो समय मिडियामा सर्वाधिक पढिएको, सुनिएको र हेरिएको पात्र कोही छ भने त्यो लोकमान नै हो । लोकमान बिनाको अखबार छैन, इन्टरनेटका सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस छैन । तर, नदेखिएका लोकमानको बारेमा कहिल्यै चर्चा भएन र होला जस्तो पनि लाग्दैन ।
लोकमानको बारेका चर्का कुरा गर्ने माननीयहरु आफू चाहिँ कत्तिको दूधले नुहाएका छन् ? निकै ठूला र चर्का कुरा गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मानेन रे
भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पति आर्जन गर्नेमाथि कारबाही गर्ने निकायमा बसेको व्यक्ति नै भ्रष्टाचारको नाइके भएको, मोलमोलाइमा काम गरेको, पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले फसाएको भन्दै लोकमानमाथि अरिंगालको गोलो खनिए जसरी सडकदेखि सदन खनिएको छ ।
अख्तियारको उपल्लो तहमा बसेर आफैं अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने यी देखिएका लोकमानको चरित्र उदांगो भएपछि आज जनमानस उनी विरुद्ध कुर्लिएको छ । तर, नदेखिएका लोकमानको बारेमा कसले आवाज उठाउने ?
लोकमानको बारेका चर्का कुरा गर्ने माननीयहरु आफू चाहिँ कत्तिको दूधले नुहाएका छन् ? निकै ठूला र चर्का कुरा गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेका मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मानेन रे । जब कि सार्वजनिक ओहोदामा पुगेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । के कारण मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएन ?
तिनै मन्त्री र नेताहरुले लोकमानको बदनाम गरेको असुहाउँदो देखियो ।
नेतासँग नजिकको साइनो भएका र जहाँ पनि चलखेल गर्न सक्ने भएपछि आर्थिक हैसियत उकास्न केही चाहिने रहेनछ भन्ने प्रमाण आफ्नै सहकर्मीहरुबाट देखिन थाल्यो ।
पाँच वर्षअघि सरकारी जागिरमा एकसाथ प्रवेश गरेका दुई दौंतरीको केही दिनअघि अनामनगरमा जम्काभेट भयो । दुवै एक-आपसलाई दाइ-भाइको नाता लगाउँछन् । तरकारी किन्न निस्किएका दाइलाई चिल्लो कारले हर्न बजाउँदै पिछा गर्‍यो । दाइले यसो चिहाए, कारबाट ओर्लिएर के छ दाइ भन्दै भाइ हात मिलाउन आए । दाइ जिल परे ।
‘तिमी कसको कारमा आएको भाइ ?’ दाइले सोधे ।
‘ल दाइ पनि ! मेरै हो नि । दशैंमा दक्षिणकाली गएर पूजा गरेर ल्याएँ अनि चलाइरा’छु ।’
‘साँच्चै तिम्रै हो ?’ दाइले पत्याएनन् । प्रसंग बदल्दै सोधे, ‘धेरैपछि भेट भो अहिले कुन पदमा कार्यरत छौ त भाइ ?’
‘नासुमै हो दाइ, बढुवा हुन सकिएन,’ भाइ चाहिा खिन्न भए झैं सुनाए ।
‘पैसा त निकै कमाएछौ नि भाइ । म जहाँको त्यहीँ छु, तिमी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यौ !’
‘ठीकै छ, यतिलाई कमाएको के भन्नु दाइ ? राम्रै छ, बाँचिएकै छ…।’
कुरैकुरामा भाइले थपे, ‘दाइ, मैले घर किनेँ सीतापाइलामा, यसो मिलाएर भाइको घर हेर्न आउनू है !’ अघि कार देखेर चकित परेका दाइ अहिले घर पनि किनेको सुन्दा झन्डै बेहोस भएनन् ।
एउटै पदमा एकै पटक नियुक्त भएका यी दुई जनाको हैसियतमा आकाश-पातालको फरक छ । दाइ चाहिँ नाम मात्रका नासु, भाइ चाहिँ नापी कार्यालयका दामवाला नासु । भाइले सीतापाइलामा गत वैशाखमा दुईतले घर किनेका छन् । कतै अख्तियारले समाउने हो कि भन्ने डरले सम्पत्ति भएभरको नातागोताको नाममा राखेका छन् रे भन्ने हल्ला चलेको थियो । भएका एउटा सन्तानलाई गिनेचुनेका धनीमानीले पढाउने महँगो स्कूलमा पढाएका छन् ।
दाइ चाहिँ महिनाभरि अफिस जान्छन्, एकदिन तलब थाप्छन् । २३ हजार ५ सय स्केलमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा वापतको रकम कटाएर बुझेको रकमले आठ हजार रुपैयाँ कोठा भाडा तिर्छन्, उधारो तिर्छन्, एक-दुई हजार पकेट खर्च राख्छन् । अर्को महिना मरुन्जेल कसरी पुर्‍याउने भन्ने तनाव हुन्छ ।
गाउाघरमा पनि तिनै नापीवालाको चर्चा हुन्छ रे ।
‘फलानोले त्यही जागिर खाएर त्यत्रो कमायो, ता चाहिँ सधैं पैसा छैन भन्छस्, क्या हो पारा’, बुवाको बारम्बारको यो भनाइले दाइको मन घोच्छ । तैपनि बोल्ने ठाउँ छैन ।
आजका धेरै मान्छेको मनमा परेको कुरो- पैसा कमाउनका लागि कि त दुई नम्बरी गर्नुपर्ने रै’छ, कि विदेशै जानुपर्ने रै’छ । सरकारले तोकेको तलबले घरखर्च चलाउन पनि नसकिने अवस्था छ । अर्कातिर, सानको विलासी जिन्दगी बिताउने नापी कार्यालयका ती भाइलाई कुनै कुराको मतलब छैन । जे छ पैसामै छ, पैसा बाहेक उनी केही सोच्न सक्दैनन् ।
जागिरेको कुरा छोडौं, समाज सेवा र राष्ट्र सेवामा लागेको बताउने राजनीतिक दलका नेताहरु नै चोखा छैनन् । पैसा आउने अरु माध्यम छैन, रोजगारी छैन, उनीहरु नै पार्टीलाई लेवीबापत धेरै रकम बुझाउनुपर्छ भन्छन्, तैपनि उनीहरुकै जिन्दगी विलासी छ ! त्यो कसरी सम्भव भयो ? यो पाटो कहिले र कसले खोतल्ने ?
यस्ता कर्मचारीको संख्या धेरै छ । कसले खोज्छ उनीहरुको आर्थिक पाटो ? मासिक २० हजार तलब खाने कर्मचारीले २५ हजार तिरेर छोराछोरी स्कूल पढाउने हैसियत कहाँबाट बनायो भन्ने कसले केलाउँछ ? त्यो पैसाको स्रोत के हो ? खोज्दै जाने हो भने नदेखिएका लोकमानहरु कति छन् कति ।
सार्वजनिक पदमा पुगेपछि मन्त्रीहरुले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा सुनचाँदीको ढुकुटी नै उनीहरुसागै छ कि क्या हो जस्तो भान पर्छ । ८०/९० तोला भएको देखाउने स्रोत चाहिा ससुरालीले दाइजोमा दिएका रे । ९० तोला सुन दाइजोमा दिने ससुरालीको हैसियत पनि त जाँच्नुपर्ने हो नि ! तर, यस्ता कुरामा कसको ध्यान जाने ?
मन्त्री र नेताज्यूसाग ९० तोला सुन हुन्छ, सामान्य नागरिकसँग ९० रुपैयाँको लसुन समेत हुादैन हाम्रै नेपालमा !
चीनका लागि राजदूत सिफारिस हुने बेलामा पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई सरकारी जागिरमा प्रवेश गर्दादेखि मुख्यसचिव हुँदासम्मको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरियो । हरेक सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सुरु नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मको सम्पत्ति विवरण यथार्थ बताउने, दलका नेताहरूले राजनीतिमा लाग्दाको हैसियत र लागिसकेपछिको हैसियत खुलस्त गर्ने हो भने भ्रष्टाचारको जरो उखेल्न बेर लाग्दैन ।
10/27/2016 12:19:00 PM समाचार
काठमाडौं, कार्तिक ११ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अब सामूहिक निर्णयबाट चल्ने भएको छ ।
हाल निलम्बनमा रहेका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले पाँच जना आयुक्तलाई भूमिकाविहीन बनाउँदै एकलौटी निर्णय गर्ने गरेका थिए । यतिसम्म कि ठूला र महत्वपूर्ण भनिएका मुद्दामा आयुक्तहरुले आयोगको निर्णय पत्रकार सम्मेलन भएपछि सञ्चार माध्यम हेरेर मात्र थाहा पाउँथे ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की हाल निलम्बनमा छन् र दीप बस्न्यात कार्यबाहक प्रमुख छन् ।
बस्न्यातको अध्यक्षतामा बसेको हालैको बैठकले अख्तियारको कामकारबाही सामूहिक निर्णयका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सातामा दुई दिन बैठक बस्नेछ । łहप्तामा दुई दिन बार नै तोकर बैठक बस्ने निर्णय भएको छ र आयोगको निर्णय अब सामूहिक हुन्छ,’ आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
यद्यपि कुनै आकस्मिक कदम चाल्नु परेमा भने आयोगको बैठक आकस्मिक रुपमा बस्न सक्नेछ ।-अनलाइनखबर
खुर्सानीको धुलो छर्केर १६ लाख रुपैयाँ लुटियो
10/26/2016 04:57:00 PM समाचार
दाङ, कार्तिक १० गते। तुलसीपुर-१४ चैलाही निवासी दुर्गा लामिछानेले आफ्नो साथबाट १६ लाख रुपैयाँ लुटिएको बताएका छन् ।
मोटरसाइकल चढेर आएका तीनजना आँखामा खुर्सानीको धुलो हालिदिएर १० लाख भारु (१६ लाख नेपाली रुपैयाँ) लुटेको लामिछानेले बताए ।
लामिछाने बुटवल बस्त्रालयका कर्मचारी हुन् । बस्त्रालयका प्रोपाईटर राजकुमार श्रेष्ठले लामिछानेलाई सो रकम कृष्णनगर भन्सारमा पठाउनका लागि दिएको बताएका छन् ।
लामिछानेले तुलसीपुर बसपार्कमा पुगेका बेला नकाबधारी व्यक्तिले आँखामा खुर्सानीको धुलो हालिदिएर रकम लुटेको बताएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए ।
लामिछाने तुलसीपुर प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । तथ्य कुरा पत्ता लगाउन अनुसन्धान भइरहेको एसपी सिंहले बताए ।-अनलाइनखबर
10/26/2016 04:03:00 PM स्वास्थ्य
शल्यक्रिया गरेको अवस्था, दुर्घटना, गम्भीर बिरामी अथवा सामान्य रुघा नै किन नहोस्, कपाल झर्छ । तर, यस्तो अवस्थाको कपाल झराई अस्थायी किसिमको हुन्छ । कपाल झर्ने यस्तो अवस्थालाई ‘टेलागेन इफ्लुभियम’ भनिन्छ । कपालको एउटा निश्चित चक्र हुन्छ : बढ्ने चरण, स्थिर भएर बस्ने चरण र झर्ने चरण । न्युयोर्कका छालारोग विशेषज्ञ डा. मार्क ग्लासोफर भन्छन्, ‘जब तपाईं साँच्चिकै तनावमा हुनुहुन्छ भने यसले कपालको चक्रलाई असर गर्छ र झर्ने अवस्थामा पुग्छ ।’ गम्भीर अवस्थाको तीन देखि ६ महिनासम्म कपाल झर्छ ।
कपाललाई सुन्दर बनाउँने नाममा अनावश्यक स्टाइल दिँदा, हेयर ट्रिटमेन्ट गर्दा पनि कपाल झर्छ । कपालमा प्रयोग गरिने अनेक प्रकारका रसायनहरुले पनि कपाल झर्न भूमिका खेल्न सक्छन् ।-स्वास्थ्य खबरपत्रिका